Saylici Midbaa Seegtay W/Q: Mohmoud Omer Osmaan - Ilays News
Saylici Midbaa Seegtay W/Q: Mohmoud Omer Osmaan
Dhacdooyinka siyaasaddeed ee Somaliland ka dhacay sannadihii u dambeeyay markaan aragto amma aad wax ka ogaato argagax iyo amakaag uunbay kugu noqonaysaa. Maanta ayaan akhriyay dhawr dhacdo siyaasaddeed oo ku qornaa buug uu qoray wasiirkii hore ee madaxtooyadda Somaliland Xirsi Cali X. Xasan wakhtigii xukuumaddii Axmed Siilaanyo. Xirsi oo xog-ogaal u ahaa inta badan arrimaha ka taagan qasriga madaxtooyadda Somaliland waxa uu sheegay dhacdooyin ay bulshadu in badan is weydiinaysay goorma ayay soo if baxi doonaan.
Tan ugu muhiimsan haddii aynu soo qaadano ayaa ah; xaaladda caafimaad ee Axmed Siilaanyo oo mugdi badan ka saarnaa shacabka sida ay tahay. Xirsi Cali X. Xasan waxa uu buuggiisa ku sheegay in madaxweyne Siilaanyo markii uu xilka la wareegay (2010), muddo yar kadib ay si dhokhso ah isku bedeshay xusuustiisu, Siilaanyo qudhiisuna ka war helay in is bedel ku dhacay xusuustiisa. Siilaanyo wakhtigaasi isaga oo dareensan is bedelka ku dhacay wuxuu go’aan ku gaadhay in uu deg deg isku casilo oo uu xilka ka dego maadama oo aanay xaaladdiisa caafimaad u saamaxayn in uu sii waddo hawsha, hase yeeshee xubno qoyska madaxweynaha ka tirsan oo kulan iskugu yimid waxay go’aan ku gaadheen in ay baajiyaan arrintaasi oo madaxweynuhu go’aansaday, waanay ku guulleysteen qorshahaasi – sida uu sheegay Xirsi-ba. Muddo 7 sanno ku dhowna madaxweyne aanay xusuustiisu fiicnayn ayaa hoggaanka dalka hayay!
Arrintan xusuusta madaxweynuhu kuma cusbna maanta dhegaha shacabka Somaliland, hase yeeshee waxa is weydiintu tahay; dembiga ay sameeyeen dadka umadda been iyo indho-sarcaad ku maaweelinaayay muddada intaasi leeg.
Ka soo gudub taasi, dalku wuxuu lahaa madaxweyne ku-xigeen lala soo doortay Siilaanyo oo ahaa Cabdiraxmaan Cabdillahi Ismaaciil Saylici oo loo igmaday in uu noqdo qofka labaad ee dalka ka arrimiya mararka qaarna tallada waddanka gacanta ku qabta marka madaxweynuhu dalka dibadiisa ku maqan yahay – sida uu dhigaayo dastuurka Somaliland. Saylici muddadaasi ay Siilaanyo xusuustiisu maqnayd wuu ka war qabay, midbaa se seegtay markii koowaad uu ka war helay in waddanka talladiisu gacanta ugu jirto mas’uul aan xaaladdiisa caafimaad iyo tan maskaxiyanba wanaagsanayn waxay ahayd in uu si deg deg u sheego – Saylici se taasu muu samaynin oo filin siyaasaddeedka socda wuxuu ka ahaa uun daawade.
Cabdiraxmaan Saylici arrintaasi in uu sheego waajib saaran ayay ahayd, cid ku qabsanaysayna may jirin, badbaada umadda iyo hoggaankeeda, waxa ayna ka mid ahayd shaqooyinka iyo waajibaadkiisa.
Marka ay madaxweynaha ku timaado xaalad noocan oo kale ah waxa waajib ah in xilka laga qaado taasi si toos loogu wareejinayo cidda uu dastuurku awood u siinayo kala ah; madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha golaha guurtida iyada oo loo raacayo sida uu dastuurka JSL dhigaayo.
Cabdiraxmaan Saylici oo ah madaxweyne ku-xigeenka waxa seegtay fursad uu ku noqon lahaa madaxweynaha Somaliland isaga oo badbaadinaya sharciyada, dastuurka iyo dawladnimada Somaliland, taasina waxa ay isaga u noqon lahayd taariikh uu baal dahab ah kaga galo dalka nasiib xumo se may se dhicin.
Haddaba su’aasha is weydiin mudan waxa ay tahay Saylici muxuu samayn doonaa haddii ay mar kale soo marto fursad noocan oo kale ahi iyada oo uu mar walba qoran yahay qadarka Alle oo aan la baajin karayn, jawaabta su’aashan waxa ay u taalla shacabka Somaliland.